Madaxweyne Rayaale oo ka hadlay Xaaladda Cudurka HIV/AIDS ee dalku maanta marayo | Somaliland.Org
Madaxweyne Rayaale oo ka hadlay Xaaladda Cudurka HIV/AIDS ee dalku maanta marayo
November 30, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Madaxweynaha Somaliland Daahir Rayaale Kaahin, ayaa War-Murtiyeed uu maanta soo saaray kaga hadlay arrimo badan oo la xidhiidha Cudurka HIV/AIDS. Waxaanu baaq u jeediyay Bulshada Somaliland.
Sida lagu sheegay Warsaxaafadeed uu ku saxeexnaa Afhayeenka Madaxtooyada Siciid Caddaani Mooge, Madaxweynaha oo Munaasibadda Maalinta AIDS-ka Adduunka oo ku beegan berri oo bisha December 1 tahay awgeed soo saaray War-Murtiyeedkan, ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga hortego Cudurkan.
Warsaxaafadeedkaas oo dhammaystiran wuxuu u dhignaa sedan;
“Madaxwaynaha JSL Mudane Daahir Rayaale Kaahin, waxa uu Maanta Soo saaray War Murtiyeed ku saabsan Munaasabada Maalinta AIDSka Aduunka ee 1/12/2009 kuna began bari oo Salaasa ah.
Madaxweynuhu isaga oo ka hadlaaya Cudurkaa afaada ee AIDS-ka, waxa uu yidhi,Sida lawada ogsoon yahay Cudurka AIDS-ku waxa loo aqoonsadey aafo culus oo heer caalami ah oo aan ku ekayn xuduuda, Midab, caqiido, jinsi iyo da, gaar ah balse wada saameeyay (haba kala darnaadeene)guud ahaan bulshooyinka ku dhaqan wadamada kala duwan ee dunida ee aynu sida joogtada ah macaamilka iyo isu-socodka ula wadaagno.
Madaxweynuhu Isagoo si faah-faahsan uga hadlaaya xanuunka AIDS-ka ,sida loogaala dagaalami lahaa Somaliland iyo talaabooyinka Xukumadu ay ka qaaday ka hortaga Aafadaas AIDS-ka waxa uu intaas raaciyay.
Tan iyo markii dalka Somaliland laga dareemay jiritaanka cudurka HIV/AIDS-ka waxay xukumada Somaliland dedaal u gashay welina ugu jirtaa xakamaynta cudurkaas. Iyadoo lagu dhaqaaqay talaabooyin muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen Ururinta xogo- caafimaad ooku salaysan xaqiiqooyin dejinta siyaasada qaran, barnaamij iyo qorshe hawleedyo muddaysan oo wax lagaga qabanayo masiibadaas, soo jeedinta baaaqyo taageero lagaga raadinayo deeq-bixiyayaashu iyo barnaamijyo wacyigalineed oo dadweynaha loogaga digaayo halista cudurka intaas ka sakow, waxay xukumaddu abuurtay ha’ad qaran oo u gaar ah hogaaminta iyo isuduwidda barnaamijyada kala duwan ee cudurka lagula tacaalayo .
Mudane Daahir Rayaale Kaahin, waxa kale oo intaas kudaray.
“Dedaalka Xukumaddu ku dhaqaaqday,iyadoo kaashanayasa bulshada rayidka ah iyo taageerada ha’addaha caalamiga ah qaarkood waxay suurta galay in lagu guulaysto Arrimaha ay ka mid yihiin tababaridda shaqaalaha ka hawlgala goobaha adeegyada caafimaadka, qaalabaynta iyo hurumarinta Shaybaadhada cusbitaalada, furidda xarumo daawayn ,talo-siin iyo daryeel oo lagu diyaariyay adeeg caafimaad iyo daawooyin kala duwan oo lacag la’aan ahiyo wacyigelinta guud ee mar walba dadweynaha loo jeediy. Saas oo ay tahay, hadaba, dawladda Somaliland marnaba ka daalimayso la-dagaalanka cudurka HIV/AIDS KA waxaanay qaadaysa talaabo kasta oo ay kaga badbaadinayso bulshadda Somaliland.
Gebagabadii waxa uu Madaxweynuhu ku booriyay Shacbiga Reer Somaliland gaar ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada in si hagar la aan ah uga qayb qaataan hawlgalada lagula tacaalaayo faafida cudurka HIV/AIDS-ka isla markaasna naxariis iyo soo dhawaayn ay umuujiyaan, gargaarna u fidiyaan dadka xanuunku helay ee bulshada ka midka ah.”